उडिरहेको नागलाई देखेको5सेकेन्डमा ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस्। तपाईंको अधुरो काम बन्नेछ…! ॐ ॐ ॐ - Samachar Post Dainik
उडिरहेको नागलाई देखेको5सेकेन्डमा ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस्। तपाईंको अधुरो काम बन्नेछ…! ॐ ॐ ॐ
मानव स’भ्यताको शि’शु बिहानीमा आदिम मानवको आद्यःचेत’नाले प्रकृतिको विनासकारी र कल्या’णकारी रुपलाई अदृ’ष्य श’क्ति’द्धारा सञ्चालित भएको ठान्यो । अदृ’ष्य शक्ति’प्रतिको ड’र अनि त्रा’सको साथसाथै आस्था र समर्पणको आधारमा प्रकृतिलाई दैवी’करण गर्यो । प्रकृतिका विवि’धरुप’लाई फरक फरक शक्ति द्धारा सञ्चा’लित भएको वि’श्वासमा वहु’देववा’दको कल्पना गरियो ।
अतः विश्वको हरेक सभ्यता’मा विकसित धर्म र संस्कृतिले प्रकृतिपूजालाई अपनाएको पाईन्छ । आदिम सभ्य’ताको उत्ख’ननबाट प्रा’प्त पुरा’तात्विक सामा’ग्रीहरुको आधारमा प्राचीन मानव प्रकृ’तिपू’जक रहेको पुष्टि हुन्छ । फरक यति हो कि देश,काल, वातावरण र पर्याव’रण अनुसार पूजा, उपासना र साधना प’द्धति फरक’फरक हुन्छ । हिन्दू धर्म र दर्शनमा प्र’कृति लगायत समस्त विश्वक’ल्या’णको लागि उपासना र प्रार्थाना गरिन्छ यस्ता उपासना र अनु’स्ठानको भि’त्रि उ’द्धेश्य वाताव’णीय र पर्या’वरणीय स’न्तु’लनलाई कायम राख्ने रहेको देखिन्छ ।
कतिपय हिन्दू राजाहरुले त आफूलाई सूर्य’वंशी, चन्द्रवं’शी र नागवंशी भनेर आफूलाई परिचित गराउँनुमा प्रकृतिपूजन प्रतिको आस्था भाव नै हो । प्रकृतिपूजा र उपासनाको परम्प’रामा हिन्दूहरुले मनाउँने नागप’ञ्च’मीले पर्या’वरणीय मह’त्व’लाई झ’ल्काउँछ नै,अर्को’तिर हिन्दू धर्म’को दार्शनिक पक्ष’लाई सम्झाउँ छ । सिधा भा’षामा भन्नु पर्दा नाग भनेको सर्प हो । सर्पले प्रकृ’तिमा भएको वि’षाक्त तत्व’हरुलाई आफू’मा ग्रहण गरेर प्रा’कृतिक सन्तु’लनलाई कायम राख्दछ ।
हिन्दू’हरुले अमृत समान दुध दिने गाईलाई जसरी आमा समान मानेर पूजा गर्छन, त्यसरी नै विष ओकल्ने सर्पको पूज गर्ने जाती त हि’न्दूधर्मी आर्यहरु नै हुन् । आज पनि भारत तथा ने’पालमा आफूलाई ना’ग जा’तीका सन्तान मान्ने जातीह’रु छन् । भारतमा त ना’गाल्याण्ड भन्न ठाउँ बि’शेष प्रख्यात छ । जातीय शास्त्रले नाग जातीलाई मं’गोल मूल आ’दिबासी हुन भनि व्याख्या गर्दछ ।
प्रकाशित मिति २२ आश्विन २०७७, बिहीबार ०२:०२